Iindaba -I-CONVISTA Iphuhlise iValve yeSango leSilayidi eliDibeneyo leenkqubo zombhobho eziphakamileyo neziphakathi ezingama-600 ukuya ku-1,000MW ezigqwesileyo (ezihamba phambili)
I-CONVISTA iphuhlise iValve yeSango leSilayidi eliDibeneyo leenkqubo zombhobho eziphakamileyo neziphakathi ezingama-600 ukuya ku-1,000MW ezigqwesileyo (i-ultra-supercritical) unit turbine
Nge-Agasti ka-2018, i-CONVISTA iphuhlise ngempumelelo iiParvallel zeSilayidi zeSilayidi zeesistim zoxinzelelo oluphezulu noluphakathi lwe-600 ukuya kwi-1,000MW ye-supercritical (ultra-supercritical) unit unit turbine.
Isebenzisa ubumbano lokutywina, kunye nokudibanisa nge-welding kuzo zombini iziphelo.
2.Isebenzisa i-valve yokuhamba ngombane kwindawo yokungena kunye nendawo yokuphuma yokulinganisa uxinzelelo lokwahlula ngaphakathi kunye nendawo yokuphuma.
3. Inkqubo yayo yokuvala yamkela ubumbano boonotsheluza. Ukutywinwa kwevelufa kuvela kuxinzelelo oluphakathi endaweni yamandla okwehla komatshini wokukhusela ivalve ekubandezelekeni okuyingozi ngexesha lokuvulwa nokuvalwa kwayo.
4. Nge-cobalt-based rigid alloy build-up welding, ubuso bokutywinwa bubonisa ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nokubola, ukumelana ne-abrasion, ubomi obude kunye nezinye izinto.
5. Ukunyanga i-anti-corrosion kunye ne-nitrogenization yonyango, indawo yokuma kwevalve ineempawu ezintle zokumelana nokubola, ukumelana ne-abrasion kunye nokutywinwa kwebhokisi ethembekileyo.
6. Ingadibana nezixhobo zombane ezahlukeneyo zasekhaya kunye nezangaphandle ukuhlangabezana neemfuno zolawulo lweDCS kunye nokuqonda imisebenzi ekude neyasekhaya.
7. Iya kuvulwa ngokupheleleyo okanye ivalwe ngexesha lokusebenza. Ayisayi kusetyenziswa njengevalve yokulawula.